Safiirada 11 Dal Oo Reer Yurub Ah Oo Cabasho U Gudbiyey Dawlada Itoobiya
Friday July 12, 2019 - 04:02:40 in News by G. Good
Safiiradan ayaa cabashadooda u gudbiyey wasiirka arimaha dibada oo ay la kulmeen.
Addis Ababa(HWN):-Wasiirka cusub ee arimaha dibada Itoobiya Gedu Andargachew ayaa wada hadal ah la qaatay safiirka midawga yurub u qaabilsan dalkaasi iyo danjirayaasha 11 wadan oo ka tirsan qaarada yurub.
Kulanka wada hadalka ah ayaa yimid ka dib markii ay danjirayaasha wadamada Yurub codsadeen inay kulan la qaataan wasiirka cusub ee arimaha dibada dalka Itoobiya Gedu Andargachew.
Safiirka midawga yurub ee Itoobiya Johan Borgs sidoo kale waxa uu sheegay in midawga yurub ay si buuxda u taageersan yihiin qorshayaasha dib u habayn ee socda isaga oo xusay inay ku faraxsan yihiin dib u habaynta ilaa hada lagu sameeyey dhaqaalaha, waxaanu cadeeyey in dib u habayntadhaqaalaha ee Itoobiya ay ku taageerayaan lacag gaadhaysa €1.4 billion ilaa sanadka 2020 si loogu guulaysto isbadalka dhaqaalaha.
Dhinaca kale safiirka midawga yurub ee Itoobiya Johan Borgs ayaa soo bandhigay sida aanay ugu faraxsanayn in dawladu hakiso adeega internet-ka wakhtiyo kala duwan isaga oo xusay in arintaasi ay saamaysay hawl maalmeedkoodii shaqo waxaanu xukuumada Itoobiya ugu baaqay inay xal u raadiso dhibaatadan.